Ipropati Umthetho kwi-Norway - Real Estate Imithetho - Abaqondisi-mthetho ka-Norway! Isithai abaqondisi-mthetho, a isemthethweni portal.
Ipropati Umthetho kwi-Norway - Real Estate Imithetho
Ukuba ufuna musa kufumana i-imeyili apha ngaphakathi elinesihlanu lemizuzu, nceda ukhangele spam ulawulo okanye uqhagamshelane nathi kuba uncedo. Nangona kunjalo kukrazulwa akavumelekanga ukuba kuvumelana oko kukuthi unreasonable kuthelekiswa ne ukuba ngokuqhelekileyo wazuza kwi-izivumelwano kuba ngokutsha rented ipropati vumelani kwi efana nale mimiselo. Kodwa enyanisweni ukuziswa ayikho onerous ukuba landlord Ukuba akukho ethile kukrazulwa wenziwe kuvunyelwene ngazo, kwi, landlord okanye tenant babe imfuneko a kukrazulwa ehambelana noko eqhelekileyo ngendlela efanayo ipropati vumelani kwi efanayo isivumelwano mimiseloIimeko iya kuviwa noba yi-Conciliation Inkundla okanye yi-Kukrazulwa Disputes abachopheli-matyala. Mhlawumbi omnye umntu unakho isicelo ukuba kukrazulwa zibe revised ngaphandle ukuphelisa le tenancy, kodwa uphengululo maze ngaphezu umahluko kwi - retail price index ukususela edlulileyo fixing ye-kukrazulwa, kwaye akavumelekanga ukuba athabathe indawo de omnye unyaka emva edlulileyo kukrazulwa fixing.
Dwellings kwi old phambi-imfazwe izindlu kunye ezine okanye ngaphezulu iiyunithi kwi-Central Oslo kuba low, regulated rents, kodwa oku umqathango wama-iza kususwa yi.
Akukho ngaphezulu kweenyanga ezintandathu,' idiphozithi inakho ukucelwa. Idipozithi leyo kufuneka kufakwa kwi-okhethekileyo-akhawunti ukubhatala eqhelekileyo bezinga inzala kwi iimali iziko kwi-Denmark. I-tenant babe imfuneko intlawulo esuka iimali iziko inzala earned kwi-mali. I-eviction inkqubo senziwe nokukhathalelwa nge-wonke umzimba I-tenant ngu kuqala walumkisa, emva koko ndacela ukusa, kwaye kwangoko evicted. Eyona isizathu kungaboniswananga ngu-non-intlawulo kukrazulwa. I-tenant banelungelo lokufumana kuba bahlala naye bakhe - wakhe lowo utshate naye okanye cohabitant, kwaye bakhe - wakhe kunye okanye womlingane okanye cohabitant ke relatives ngqo umgca we scent okanye descent okanye foster abantwana. I-tenant ayina ilungelo unikezelo yakhe amalungelo okanye izibophelelo kwabanye abantu ngaphandle kwemvume of the landlord. I-tenant akavumelekanga ukuba enze sifunekayo ukuba rented kwipropati ngaphandle kwemvume of the landlord. Ekupheleni tenancy, lendlu kufuneka elungileyo ukuze, kunikwa eqhelekileyo wear kwaye tear, kodwa hayi kwakhona ukuba yayo yoqobo imeko. Kwi-ngoo- a deregulation le izindlu candelo waqalisa, kwaye ngoku Norway ubani liberalized izindlu kwiindawo zentengiso, ifana ne-USA okanye e-Australia. Umthetho Tenancy isuswe yokugqibela kukrazulwa ulawulo, ngaphandle Oslo phambi-imfazwe izindlu. Kukho ngokubanzi ezopolitiko consensus ukuba yerente kwimakethi imele ebalulekileyo inxalenye yayo yonke izindlu kwiindawo zentengiso, nto leyo ifuna numerous yerente izindlu isebenze kakuhle ukongeza koku, kulungile-ukusebenza kakuhle yerente kwimakethi ngu bakholelwa ukuba stabilize ixabiso umnini-uxakekile izindlu. Ngexesha elinye, kukho i-ezivelayo consensus ukuba free kwimakethi akakwazi kubonelela ukutya izindlu kuba amahlwempu.
Ngowe- Urhulumente wavuma ukuba urhulumente kufuneka imali omtsha non-ngenjongo yokwenza ingeniso yerente izindlu candelo, ngenjongo ukwakha, amatsha-non-ngenjongo yokwenza ingeniso yerente dwellings kuleminyaka - eminyaka, ebekwe kwi-wemiceli-ezinemigodi, kunye low kwaye regulated rents.
Get ngenyanga ezifanelekileyo uhlalutyo ngosuku lwehlabathi impahla kwamanye amazwe kwaye exclusive, ebutsheni ukufikelela ngamathuba otyalo-mali akhululwe ilungelo lakho ibhokisi yangaphakathi. Ukufumana ezifanelekileyo analyses kunye nempahla inikezela ukususela ihlabathi ke zokuhlala kwiimarike ngqo yakho ibhokisi yangaphakathi.
Norway Personal Income Tax Umyinge
Norvegio: Internacia Arbitracia Tribunalo Decidoj